Saripika : nahafa-po ny mpiofana ny tetikasa « Tsiry » | NewsMada
Saripika : nahafa-po ny mpiofana ny tetikasa « Tsiry »
Tontosa ny 6 hatramin’ny 10 novambra teo, tetsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny fiofanana mikasika ny teknika fakana sary. Tafiditra indrindra amin’ny hetsika, « Iray volan’ny sary » andiany fahavalo, moa ity fiofanana ity ka nahatratra fito ireo tanora liana sy nanatrika izany.
Raha tsiahivina, samy mitondra ny tetikasany (eo amin’ny tontolon’ny fakana sary) ny mpandray anjara. Nampiofana azy ireo sy nanolo-kevitra amin’ny fanatontosana izany i Pascal Grimaud, matihanina amin’ny tontolon’ny fakana sary. Anisan’ireo nandray anjara tamin’ny fiofanana i Mat Li, mpanakanto tsy zovina intsony, indrindra ho an’ny eto an-dRenivohitra.
Nambarany fa maro ny tombontsoa azo tamin’ity fiofanana ity, toy ny fifanakalozana eo amin’ny samy mpanakanto, ny fifampizarana traikefa ary ny fanatonana kokoa ny IFM, izay ivontoerana iray azo iaraha-miasa tsara raha maniry ny hanatanteraka tetikasa eo amin’ny lafiny zavakanto.
Taorian’izao fiofanana izao, hotsongaina ireo tetikasa tsara indrindra ka arahi-maso manokana sy hotohanana ny mpaka sary tompon’izany, amin’ny fanatontosana ilay tetikasany, manomboka ny volana desambra. Hisy koa ny fampirantiana ny sanganasany, eto an-dRenivohitra.